Maitiro ekuti udzorezve mabhuru emwenje: mhando, chii chinoitwa navo uye varaswa kupi | Green Renewables
Dzokororazve mwenje mabumba
Chiedza mababu ndiwo akajairwa imba marara mudzimba dzese. Kugadzirisazve girobhuusi haisi nyaya yakapusa kuitiswa. Rudzi rumwe nerumwe rwegirobhu rinodzokororwa zvakasiyana, pachokwadi mamwe mabhuru haatombogadziriswazve. Kune vanhu vazhinji vasingazive kuti sei dzokorodza mababu kana chii chinofanira kuitwa navo.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve maitirwo emwenje mabhuru uye chii iwo maitiro avo.
1 Dzokorodza mababu akamboshandiswa
2 Mhando dzebhubhu
3 Maitiro ekudzokororazve mwenje mabumba zvakagadzirwa
4 Iko kwavanogadziriswazve maererano nemhando yavo
Dzokorodza mababu akamboshandiswa
Kunyangwe ichitaridzika kunge isinganzwisisike, sezvatakaratidza pakutanga, haasi ese mababu anogona kudzokororwa. Halogen mwenje uye incandescent mababu haana kuiswa muWEEE, iyo Iwo mutemo unogadzirisa chaiyo yekuchengetedzwa kwenzvimbo yemarara emagetsi nemagetsi zvigadzirwa.
Naizvozvo, tinogona kudzokorora mabhaluni emagetsi, kuburitsa mababu, uye maLED. Tinogona zvakare kudzokorora marambi. Kune rimwe divi, halogen uye incandescent mababu haana kudzokororwa. Kunyangwe, sezvauchaona mumashure, zvinogona kushandiswa kune anonakidza DIY mapurojekiti. Izvi zvinoenderana nemhando yemabhalbu ayo atinoda kurasa, nekuti manejimendi eCFL (mashoma ekushandisa) mababu iyo yakasiyana zvachose nekutarisira LED mababu. Haufanire kumbokanda girobhu racho mumudziyo wegirazi.
Kune akatiwandei emhando yemagetsi mabhuru uye zvinoenderana nerudzi rwawo, zvimwe zvinhu zvinofanirwa kutariswa. Ngatione zvavari:
Filament mababu: Sezvo mhando idzi dzemwenje, dzakadai semarambi e halogen, dzisingakwanise kudzokororwa, tinofanirwa kudzirasa mumidziyo yegrey kana yerima (zvichienderana nehuwandu hwevanhu). Mumudziyo wemarara uyu, unonziwo chikamu chasara, izvo zvinhu zvisina mudziyo wavo wekudzokorodza zvinokandwa kure.
Simba rekuchengetedza kana mababu emagetsi. Mhando iyi yegirobhu ine mercury, saka haigone kuraswa mumarara kana mumudziyo unogadziriswazve. Izvo zvinodikanwa kuti uvaendese kunzvimbo yakachena uko kwavanozoraswa zvakachengeteka kuitira gare gare marara.
Akatungamirira Mabumba Aya mababu anowanikwa nemagetsi anoshandiswa zvakare. Kugona kuzvibata nemazvo zvakafanira kuenda nazvo kunzvimbo yekuchenesa inoenderana.
Maitiro ekudzokororazve mwenje mabumba zvakagadzirwa
Zvekushandisa zvekare, zvinonyatso kuzivikanwa sekuvandudza marara, zvinosanganisira kushandura zvakaraswa kana kusisiri zvigadzirwa zvinobatsira muzvigadzirwa zvitsva zvemhando yepamusoro kana kukosha kwezvakatipoteredza. Hazvina kumbobvira zvichikurudzirwa kushandisa fluorescent mababu mumapurojekiti akadaro, sezvo iwo aine zvine muchetura wakanyanya. Mune ino kesi, isu tichapa mamwe mazano ekupa mashandisiro matsva eakare incandescent mababu.
Mini vhasi: Nokubvisa chikamu chevharo netambo yemukati, tinogona kushandisa girobhu racho sevhasi yekuisa maruva madiki. Tinogona kuisa chigadziko pavari uye nekushongedza tafura kana pasherufu, kana kana tikawedzera tambo kana tambo kuzvisungirira, tichava neakanakisa akamira bindu.
Chipfeko chejasi: Girobhu racho harina chinhu mukati, isu tinongofanirwa kuisa sement pairi, kuisa sikuru mukati maro uye kumirira kuti isimbe. Iye zvino isu tinongofanirwa kugadzira gomba diki pamadziro uye nekuisa jasi redu. Tinogona zvakare kuishandisa kumutsiridza mabato emhando dzese dzemadhoo.
Marambi emafuta: Semazuva ese, chinhu chekutanga kuita kubvisa iyo filament kubva kubhuruu. Tevere tichafanirwa kuisa mafuta kana doro remarambi kana mwenje uye toisa tambo.
Kisimusi kushongedzwa: Nemagirobhu emwenje ekare mashoma tinokwanisa kugadzira edu ekushongedza emuti weKisimusi. Isu tinongofanirwa kuvapenda neiyo motifs yatinoda zvakanyanya uye nekuwedzera tambo diki yetambo kuti vaturike.
Terrariums: Nedzimwe hurungudo uye chirimwa chidiki kana chidimbu chemoss isu tinogona kugadzira terrarium. Sezvakaita ma mini vases isu tinogona kuisa base kana kuturika.
Tumira mugirobhu mwenje: Nenzira imwecheteyo sekunge riri bhodhoro, tinogona kuvaka ngarava mukati megirobhu redu remwenje.
Iko kwavanogadziriswazve maererano nemhando yavo
Chiedza mababu zvinhu zvinoshandisa magetsi kujekesa imba yedu kana zuva ranyangarika. Kune akatiwandei emhando yemagetsi mabhuru ayo anogona kunyatsorongedzwa zvichienderana nesimba ravo rekushandisa, hupenyu, kana huwandu hwechiedza chavanoburitsa. Aya ndiwo marudzi epamusoro emagetsi emagetsi aripo:
ari mabhanditi emagetsi iwo mabhuru echinyakare. Muna 2012, kugadzirwa kwayo kwakarambidzwa muEU nekuda kwehupenyu hwayo hupfupi uye simba rakawanda rekushandisa.
La halogen girobhu racho inoburitsa mwenje une simba kwazvo uye inotungidza pakarepo. Vanoburitsa kupisa kwakawanda uye hupenyu hwavo hunobatsira hunogona kuwedzerwa.
ari Simba rekuchengetedza magetsi vane hupenyu hwakareba kupfuura mababu apfuura uye anoshanda kwazvo.
Hapana mubvunzo kuti akatungamirira girobhu racho ndiwo akanyanya kugadzikana pamusika. Izvo hazvina tungsten kana mercury, zvine rakareba rakareba masherufu uye rinodya zvakanyanya kuderera pane zvese zvigadzirwa zvataurwa pamusoro.
Unogona kufunga kuti mabumba anokwanisa kutakura zvinhu zvegirazi anoenda mugaba rechitema, asi izvi hazvina kunaka. Pamusoro pegirazi, girobhu racho rine zvimwe zvinhu zvakawanda, zvinofanirwa kupatsanurwa usati warasa. Ndicho chikonzero girobhu racho rinofanira kucheneswa.
Kufambisa basa iri nekunyatsogadzirisa marara, AMBILAMP (sangano risingabatsiri rinovavarira kugadzira marongero akadaro ekurapa uye marapirwo) akagadzawo zvimwe zvinogona mababu emarara ekuunganidza, uko chero mugari anogona kutora iwo nekuashandisa. Muzhinji, aya mapoinzi ari mumakambani kana vanogovera emidziyo yemagetsi, senge zvitoro zvehardware, zvitoro zvemwenje kana zvitoro, uko chero mugari angatore mabhaluni emagetsi akamboshandiswa. Kunyanya, aya ekuunganidzwa anotarisa kuunganidzwa kwemwenje ye fluorescent, mwenje inoponesa magetsi, mwenje inoburitsa, mwenje dze LED nemarambi ekare.
Iyo yekudzoreredza maitiro emagetsi mabhuru anotanga nekuparadzanisa izvo zvigadzirwa zvinozvinyora. Mercury nephosphorus zvakaparadzaniswa mushure mekudzikiswa uye zvachengetedzwa zvakachengeteka. Mapurasitiki anoenda kune epurasitiki ekudzokorodza zvirimwa, girazi kune simende zvirimwa, girazi uye zvedongo maindasitiri, uye simbi kune foundries. Ivo vese vachapa hupenyu kuzvinhu zvitsva.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekudzokorora marambi emagetsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Dzokororazve mwenje mabumba
Chii chinonzi simbi